(Sawirro) Munaasabad lagu maamusayay xuska dhalashada Nabigeena Muxamad N.N.K.H oo Garowe lagu qabtay. | puntlandi.com
(Sawirro) Munaasabad lagu maamusayay xuska dhalashada Nabigeena Muxamad N.N.K.H oo Garowe lagu qabtay.
Munaasabad lagu maamusayay xuska dhalashada Nabigeena Muxamad N.N.K.H ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe, waxaana munaasabadda ka qeybgalay Masuuliyiin ka tirsan Wasaaradda Cadaalada iyo Arimaha Diinta Puntland.
Munaasabadan oo aheyd mid ay soo qaban qaabiyeen culimaa’udiinka Ahlu sunna Waljamaaca ee ku nool magaalada Garoowe ayaa waxaa lagu xusayay dhalashada Xabiibkeena Muxamad N.N.K.H.
Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qeybgalay Agaasimaha Awqaafta iyo arimaha diinta Puntland Shiikh Ismaaciil Xaaji Cabdi iyo mashaa’iqda Ahlu sunna ee ugu caansan Caasimada Puntland ee Garoowe.
Banaabax si weyn loo soo agaasimay ayaa galabnimadii lagu qabtay Barxada Garoowe,Iyadoo socod dheerna lagu soo maray Magaalada taaso lagu muujinayo shicaarka weynaynta dhalashada Nabiga SCW.
Sidookale xaflad lagu xusayo Dhalashada Nabiga SCW ayaa lagu qabtay Masjidka Nabawi ee magaalada Garoowe
Sheekh Cabdirisaaq Cali Shirwac oo ku hadlay magaca qabanqaabiyaasha munaasabadda,Shiikh Maxamed Siciid Warsame iyo Shiikh Jaamac Cali Liibaan ka hadlay ujeedada munaasabadda, ayaa sheekeeyay ahmiyadda ay leedahay in la weeneeyo dhalashada nabi Muxamad N.N.K.H.
Waxaa ay ka sheekeeyeen Siiradda Nabiga NNKH iyagoo si aad ah ugu dheeraaday waxa ay diintu ka qabto in la xuso dhalashada Nabiga NNKH,waxaa ay sheegeen in Nabiga Muxamed SCW uu isagu ahaa qofkii ugu horeeyey ee xusaha dhaladiisa isagoo soon ku weyneeyey.
Agaasimaha diinta iyo awqaafta Wasaaradda Cadaalada Puntland Shiikh Ismaaciil Xaaji Cabdi ayaa sheegay in dowladu ay fasaxday shaqaalaha iyo schoolada iyadoo ku weynaynaysa xuska dhalashada Naniga SCW,waxaa uu intaa ku daray in dowladda Puntland ay mar walba ka go,antahay xuska dhalashada Nabiga SCW.